CAN 2019 - Benin: Sida laga soo xigtay Oswald Homeky, "Squirrels waxay ka faa'iideysataa goobta xirfadeed" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY »2019 - Benin: Sida laga soo xigtay Oswald Homeky," Squirrels waxay ka faa'iideysataa goobta xirfadeed "- JeuneAfrique.com
CAN 2019 - Benin: Sida laga soo xigtay Oswald Homeky, "Squirrels waxay ka faa'iideysataa goobta xirfadeed" - JeuneAfrique.com
Wareysigan gaarka ah, Wasiirka Sports Homeky Oswald soo laabtay on isreebreebka ee Dabagaale for CAN 2019, ayaa muujiyay sida uu diyaar yahay inuu ka tago dhibaatooyinka cagta Benin iyo details siyaasadda la doonayo sports Madaxweynaha Patrice Talon.
Ka dib markii isreebreebka ee xulka qaranka tartanka African Cup of Nations (CAN), wareegaya on shabakadaha bulshada video ah oo ka mid ah Head of State of Benin hesho guul ay deriskiisa Togo (2-1 in Cotonou dabagaalaha ) maalinta u dambaysa isreebreebka. xigxiga A ka tarjumaysa danaha muujiyey maamulka ugu sareeya ee Benin in isboortiga guusha. Beninese Wasiirka dhallinyarada ahaa ee Dalxiiska, Dhaqanka iyo Isboortiga, Oswald Homeky, ayaa sheegay in Dhallinyarada Afrika Istaraatijiyadda la hirgeliyay si loo gaaro tan.
Dhalinyarada Afrika: Benin ayaa ku soo laaban doona CAN, sagaal sano ka dib markii ay ugu dambeysay ka qayb qaadashadii marxaladdii ugu dambaysay ee ka dhacday Angola. Waxaan aragnay in soo laabashada lagu dabaaldegay sharaf ...
Oswald Homeky: Waxaa jiray wada-hadal weyn oo ku saabsan kooxda qaranka. Beninese, oo ay ku jiraan kuwa qurba joogta ah, ayaa dhab ahaantii ka qeybgalay kooxda ka hor ciyaarta finalka ee Togo. Waa waxqabad aad u fiican, taasoo dhamaatay sagaal sano oo maqnaansho ah. Soo noqoshadan waxaa loo tixgeliyaa la yaab, laakiin waxa aan rabno waa in mustaqbalka joogitaanka Benin ee finalka ee CAN noqdaan wax caadi ah.
Waxaad joogtaa goobta soo noqoshada Michel Dussuyer - kuwaas oo horayba u qabtay jagadaas udhexeeya 2008 iyo 2010 - kursiga xulashada. Maxaad u dooratay?
Tababarihii hore (Oumar Tchomogo) ayaa hogaaminayay ciyaartoydii ugu horeysay ee u tartameysa Gambia (1-0, June 2017). Waxa uu markaas yimid markii uu dhamaaday heshiiska. Michel Dussuyer ayaa indhahayga ku jiray doorasho macquul ah. Wuxuu aad u yaqaana dalka, wuxuu leeyahay aqoon aad uwanaagsan oo Afrika ah [uu si wanaagsan u tababaray Guinea iyo Ivory Coast, la soco]. Iyadoo xirfado isku mid ah, waxaan dooran lahaa Beninese. Laakiin qaabka iyo waayo-aragnimada Dussuyer ayaa isbeddel sameeyay, xulashadana waxaa ansixiyay federaalka.
Sanado badan, xulashada, marka lagu daro maqnaanshihiisa ee kama dambaysta ah ee CAN, waxay ahayd mid caqli-gal ah, ciyaaro ciyaaro yar. Miyuu soo jiidan waayay ciyaartoyda?
Taasi waa sax. Oo waxaan boggan u rogay. Maanta, faa'idooyinka xulashada ee qaab-dhismeed xirfadeed. Sheekooyinka gunnada ayaa horay loo dejiyey. Arrimaha la xiriira socdaalka, hoyga iyo qalabka. Xiriirka ciyaartoyda waa dheecaan u eg. Ma dooneyno dhibaatooyin hore.
Si aad u diyaarisid Caymiska, wax walba waa la qaban doonaa si shaqaalaha iyo farsamoyaqaanadu u shaqeeyaan xaalad wanaagsan
Waxaa jira isku-dhacyo dhab ah oo u dhexeeya xiriirka kubada cagta ee Benin iyo FFF. Tusaale ahaan, diyaarinta CGI, wax walba waa la qaban doonaa si shaqaalaha iyo farsamoyaqaanadu u shaqeeyaan xaalado wanaagsan. Waxaa jiri doona tababarka koowaad ee Cotonou, ka dibna dibedda kale [laga yaabo in Imaaraadka Carabta]. Intii lagu jiray ololihii doorashada ka hor doorashadii madaxweynaha, Musharixiinta Patrice Talon ayaa ahaa "Bilaw cusub". Tani sidoo kale waa kiiska ciyaaraha Benin. Waxaan aaminsanahay in in ka yar seddex sanno, waxaan horay u sameynay horumar wanaagsan, laakiin waa inaan sii wadno shaqada, marna naso.
Horyaalka Qaranka wuxuu si caadi ah u socdaa tan iyo markii 2017, laga soo bilaabo bilowgii sannadihii 2000 si joogta ah looga tegi jiray, aan la isku afgaran ama aan lagu dhawaaqin. Miyaad ku qanacsan tahay?
Soo kabsashadani waxay khuseysaa kubadda cagta, taas oo ah cayaaraha ugu caansan Benin, laakiin sidoo kale farsamooyinka kale. Madaxwaynaha Jamhuuriyaddu waa mid naxariis badan, wuxuuna fahamsan yahay in cayaaruhu uu aad u fiican yahay.
>>> READ - Benin: Wasiirkii Oswald Homeky, waa kan ugu da'da yar
Waa shaqo abuuris oo leh kaalin dhaqaale, waxbarasho iyo bulsho. In Benin, waxaa jira dad hibo leh, ciyaartoy cayaaro ah oo natiijada hela. Bishii Diseembar 2016, intii lagu jiray soo bandhigidda barnaamijka dawladda ee ciyaaraha isboortiga Benin, waxaan sheegay in natiijada ay tahay natiijada mashruuca. Sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan bixino lacagta horyaalkeena si caadi ah.
Just for cagta Benin ah, waxaan ka hadli miisaaniyad of 400 milyan oo faran (euros 610 000) CFA siiyey kooxda L1, L2 iyo D3 xilli 2018-2019. ma ka tarjumaya xaqiiqda?
Taasi waa. Koox kasta oo 1 League waxay heshaa 10 milyan oo Faransiis Faransiis ah, kuwaas oo ka mid ah League 2 lix Milyan, iyo kuwa 3 Division, waa 4 million. Miisaaniyaddan ayaa kordhay marka loo eego sanadkii hore (353 million CFA francs). Deeqdan oo kale, waxaan ku weydiineynaa in naadiyada ay bixiyaan macalimiinta iyo ciyaartoyda, qandaraasyada taageerada, iyo inaan helno caddayn heshiisyadan.
Dawladdu waxay sidoo kale dooneysay shirkadaha in ay ku maal gashadaan seddexda nooc ee kale (kubbadda gacanta, ciyaaraha, kubbadda kolayga). Ma jiri doonaan canshuur celin?
Haa. Canshuurtan waa 1 / 1000, marka laga reebo VAT (sharciga dhaqaalaha 2019). Canshuurtaani waxay noqonaysaa canshuur laga jarayo. Tani waxay ku saabsan tahay shirkadaha dawlada, kuwa ku shaqeynaya ansaxinta gobolka, iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Guud ahaan, tani waxay ka dhigan tahay shirkadaha 600. Dunida shirkadda ayaa soo dhaweysay mashruucan. Waxaa jira jawaabo dhab ah. Canshuurtan ayaa gacan ka geysan doonta hagaajinta dhismayaasha, dhiirrigelinta cayaaraha. Waaxda gaarka loo leeyahay waxay u baahan tahay halista mashruuc ay dawladdu qaadato sida ammaanka.
Sidee baa dib-u-habeyn loogu sameynayaa dhaqanka isboortiga ee Benin?
Waxaan go'aansanay in heerka dugsiga, tababarka isboortiga waa in ay bixiyaan barayaasha oo loo qoondeeyay edeb walba. Waxa kale oo loo baahan yahay heerka degmada, dhismayaasha ku habboon, la barayaasha fasallada isboorti kasta 89 meelaha [77 caadi ah, degmooyinka 13 Cotonou lacag caddaan ah, note]. Goobaha dhismaha waa la dhisayaa, goobaha kale ayaa la furi doonaa. Ugu dambeyntiina, waxaan furi doonaa akadeemiyada waaxeed, oo ay kaashadeenu ka faa'iideysan doonaan taageerada iyo tayada.
Iyadoo qayb ka ah mashruucan si loo abuuro akadeemiyado gobollo dhowr ah, waxaan la xiriirnay Jean-Marc Adjovi Boco, oo ah kabtankii hore ee Squirrelskaasoo ahaa mid aad u xiiso badan. Wuxuu ka caawiyay dhisitaanka akadeemiyadda Diambar, Senegal, taas oo tixraac ah Afrika. Wuxuu durbadiiba yimid Benin, waxaana ku dhawaaqeynaa qandaraaskiisa.
Sidee baad u maalgelin kartaa dib u soo kabashada cayaaraha Benin?
Miisaaniyadda dawlad-goboleedka, waa mid fudud. Waxaan badanaa la weydiiyaa su'aashan kharashka. Waxaan mar walba sheegaa in kharashka yar uu ka yaryahay in la yareeyo dadka dhalinyarada ah ee waddooyinka maraya, kuwaas oo mararka qaarkood ku kicin kara xad-dhaaf ah xagjirnimada. Had iyo jeer ku haay maanka in xitaa haddii dhallinyaro ah ku guuldareysto inuu ka mudhbixin doonaan cayaaraha, waxa uu noqon doonaa mid waxtar leh bulshada, sababtoo ah waxa ay ka faa'iideysteen tababarka wanaagsan, waxbarasho wanaagsan. Taasi waa waxa muhiimka ah.
Cameroon - Kribi: Shilalka wadada ayaa dila dad dhowr ah